Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa dilka hogaamiye sare oo tirsan Al-Qaacida – SBC
Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa dilka hogaamiye sare oo tirsan Al-Qaacida
Posted by editor on June 4, 2011 Comments
Hogaamiye sare oo ka tirsan shabakada Al-Qaacida Ilyaas Kashmiri ayaa la xaqiijiyey in lagu diley weerar dhanka cirka ah oo ay Mareykanku ka fuliyeen wadanka Pakistaan.
Weerarkan oo ay fulsiey mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee duuliye la’aanta ah, waxaase wali ilaa iyo hada dilkiisa si buuxda u cadeyn xukuumada Washington & Islamabad.
Dilka Ilyas Kahsmiri oo ahaa hogaamiye sare oo ka tirsan Al-Qaacida ayaa lagu tilmaamay in uu yahay dhabar jab weyn oo soo gaarey Al-Qaacida, ka dib dilkii bishii hore waqooyiga Pakistan loogu geystey Cusama Bin Ladin oo ahaa hogaamiyaha kooxdaasi.
Ilyaas waxaa kale oo uu ahaa hogaamiyaha ururka Harkat-ul Jihad Islami (HUJI),ee ka dagaalanta gobolada Jamu & Kashmir ee ay ku muransan yihiin Hindiya & Pakistan, iyadoo kooxdaasi ay dagaal ba’an kula jirto ciidamada dawlada Hindiya.
Ilyas Kashmiri waxaa lagu eedeynayey in uu ka dambeeyey weeraro kala duwan oo ka dhacay Waqooyiga qaarada Aasiya, sida weerarkii 2008-dii ka dhacay Hotel ku yaal magaalada Mumbai ee wadanka Hindiya oo xasuuq badani uu ka dhacay.
Laakiin wararka dilkiisu ma ahan kan oo kaliya sanadkii 2009-kii waxaa fashilmay warbixin lagu sheegay in weerar xaga cirka ah lagu diley Kashmiri, inkastoo warkaasi uu been noqdey goor dambe.
Hase yeeshee waraaq Fax ah oo ay soo direen xoogaag xarakada Harkat-ul Jihad Islami (HUJI), gaar ahaan guutada 313 ee uu madaxda ka ahaa Ilyaas ayaa lagu xaqiijiyey dilkiisa, iyadoo ku xusey warbixintooda xiliga la diley hogaamiye Ilyaas Kashmiir.
“ILAAH ha u raxmadee waxaan cadeynayaa in uu shahiiday Ilyaas Kashmiri oo hogaamiye muhiim ah u ahaa dagaalka Jihaadka, waxaa uu ku shahiiday weerar duqeyn ah oo dhacay 11:15 habeenimadii Jimcaha, weerarkaasi oo ka dhacay gobolka Waziristan” sidaasi ayaa lagu xusey bayaanka Harkat-ul Jihad Islami (HUJI),
“ILAAH Idinkiis, Ameerika oo ah sanam, waxay ka shaleyn doonaan oo dhawaan arki doonaan aargoosi, waxaana inoo ah bartilmaameed Ameerika” ayay ku xuseen warbixintooda kooxda HUJI.
Ilyaas Kashmiri wuxuu ahaa xubin muhiim ah oo ka mid ah dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah Mareykanka & xulufadiisa, waxaana uu ka joogay Al-Qaacida darajo sare waxaaba jirey warar sheegaya inuu u sharaxnaa ragga badalaya Cusaama Bin Ladin xubnaha ugu horeeya.
Halkan ka akhri warbixin SBC ka qortey Ragga badali kara Bin Ladin oo Ilyas ka mid ahaa